Sidina Johannesburg mankany Lagos amin'ny South African Airways izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina Johannesburg mankany Lagos amin'ny South African Airways izao
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao Mafana Nizeria • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Sidina Johannesburg mankany Lagos amin'ny South African Airways izao.
Ity toerana manokana ity dia mitondra ny SAA ho iray amin'ireo tsenan'ny dia lehibe indrindra any Afrika ary faly izahay fa afaka manohy ny asany indray, manome rohy eo amin'ireo toekarena roa lehibe indrindra ao Afrika.
Manomboka ny 12 Desambra 2021, ny South African Airways (SAA) dia hanampy zotra kaontinanta manan-danja hafa amin'ny tambajotrany miaraka amin'ny sidina in-telo isan-kerinandro avy any.
Johannesburg mankany Lagos any Nizeria. Ny SAA dia nanidina nankany Nizeria nandritra ny 23 taona lasa ary ny famerenana ny serivisy dia fanampim-panampiana ho an'ny tambajotra mitombo ao amin'ny kaontinanta Afrikana.
"Ity toerana manokana ity dia mitondra ny SAA ho iray amin'ireo tsenan'ny dia lehibe indrindra any Afrika ary faly izahay fa afaka manohy ny asany indray, manome rohy eo amin'ireo toekarena roa lehibe indrindra any Afrika," hoy i Thomas Kgokolo, Tale Jeneralin'ny South African Airways. Ny famerenana indray ny serivisy eo anelanelan'ny Johannesburg ary Lagos dia ampahany amin'ny paikadin'ny fitomboana miandalana an'ny SAA, rehefa nanomboka niasa tanteraka tamin'ny volana septambra tamin'ny zotra an-toerana ao Afrika Atsimo sy Afrika.
“Ny tanjonay dia ny hanohy ny fampivelarana ny tambazotra zotra atosiky ny filan'ny mpandeha sy ny mety ho fidiram-bola. Manombatombana hatrany ny fahafaha-manao eo amin'ny tsena eo an-toerana, isam-paritra ary iraisam-pirenena izahay, ”hoy i Kgokolo.
Tsy ny vaovao ihany Johannesburg-Lagos route dia miasa ho toy ny fifandraisana ara-barotra sy ara-toekarena manan-danja eo amin'ny firenena roa tonta nefa koa hanompo ny tsenan'ny fizahan-tany mivoatra any amin'ny firenena roa tonta. Ny SAA dia hanohy ny fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany Afrikana Tatsimo hampiroboroboana ny firenena ao Nizeria miaraka amin'ny fanantenana fa hiteraka mpitsidika bebe kokoa amin'izao fotoana izao rehefa nohavaozina ny famerana ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena momba ny areti-mifindra.